मुटु स्वस्थ राख्न के खाने, के नखाने ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com मुटु स्वस्थ राख्न के खाने, के नखाने ? - खबर प्रवाह
खानालाई सन्तुलित गर्न सकियो र नियमित रुपमा व्यायाम गर्न सकिएको खण्डमा धेरै किसिमका रोगहरूबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । हार्ट-अट्याक, सुगर लगायतका समस्या समाधानमा खानपानको समेत विशेष भूमिका रहेको हुन्छ ।
बेलुकाको खानामा दुईदेखि तीनवटा सुक्खा गहुँको रोटी, साग र मौसमी तरकारी हुनुपर्छ । बेलुका ८ बजेभित्र खाना खाइ सक्नुपर्छ । बिहान एक छाक मात्र भात खाने गर्नुपर्छ ।
धेरै शारीरिक श्रम गर्नेले धेरै र थोरै गर्नेले थोरै नै खानुपर्छ । बेलुकाको खाना खाएपछि तुरुन्त सुत्नु हुँदैन । कम्तीमा दुई घण्टापछि मात्र सुत्नुपर्छ ।
घ्यू, तेल तथा अन्य चिल्लो मात्रा जति सक्यो कम प्रयोग गर्नुपर्छ । खाना पकाउन शुद्ध तोरीको तेल नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
फाइबरयुक्त खानाहरू गहुँ गेडागुडी, हरियो सागपात खानुपर्छ । गेडागुडीलाई अङ्कुरित रूपमा खानु अझ बढी लाभदायी हुन्छ । फापर, कोदो, जौ, मकै आदिले पनि मुटुलाई फाइदा गर्छ ।
जनताले साथ दिनुप¥यो , मेरै पालामा धेरै विकास निर्माणका कामहरु हुन्छन् : अर्थमन्त्री शर्मा
एक सय शैय्याको अस्पताल हुनेले मात्रै नर्सिङ् पढाउन पाउँछन् : मन्त्री पौडेल